किन खिइन्छ दाँत? के हाे यसकाे उपचार? – Health Post Nepal
किन खिइन्छ दाँत? के हाे यसकाे उपचार?
२०७८ चैत ६ गते १०:०९
मानिसहरु खानपान र शारीरिक सरसफाईमा ध्यान दिए पनि मुख स्वास्थ्यको सवालमा भने कमैले ध्यान दिइरहेका हुन्छन्। खानेकुराहरु खाँदा दाँतमा खाना अड्किएर बस्ने गर्दछ। मुख स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा र दाँतको सरसफाईमा बेवास्ता गर्दा किटाणुहरुले दाँत बिगार्न थाल्छन्।
किटाणुहरुले आक्रमण गरेर दाँतमा एसिड बनाउने गर्दछ। सोही एसिडले दाँतमा भएको इनामेललाई बिगार्ने काम गर्छ। यसै कारण दाँत खिइने वा कुहिने, सडन भएर दाँत कालो हुँदै जाने गर्दछ, जसलाई दाँतमा किरा लागेको भन्ने गरिन्छ–यसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘डेन्टल केरिज’ पनि भनिन्छ।
दाँतमा तीन तह हुन्छ, इनामेल, डेन्टिन र पल्प। इनामेलमा किरा लाग्दा मानिसहरुलाई थाहा पनि हुँदैन। किरा लागेको देखिँदैन र नदेखेसम्म मानिसहरुले याद पनि गर्दैनन्।
दाँतको दोस्रो तह ‘डेन्टिन’ सम्म पुग्दा दाँतमा सिरिङ-सिरिङ हुन थाल्छ। तातो चिसो खाँँदा पनि समस्या आउन थाल्दछ।
यो बेलामा पनि उपचार गरेन वा किरा लाग्नबाट रोकिएन भने दाँतभित्र भएको नसा ‘पल्प’ सम्म पुग्दछ। पल्पको तहमा पुगिसकेपछि दाँत एकदम दुख्न थाल्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थालाई ‘पल्पाइटिस’ पल्पमा संक्रमण भएको भनिन्छ।
तर यति हुँदा पनि दुखाई सहेर बसिरहे वा फार्मेसीबाट दुखाईको औषधि ल्याएर खाँदै बसिरहे संक्रमण झनै बढ्दै जाने गर्दछ, जसका कारण कहिलेकाँही गाला सुन्निने, पाक्ने हुन सक्दछ भने दाँतलाई झिक्नै पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दाँतको जराहरुलाई संक्रमण भएर ठूलै घाउ हुने, हड्डहरुमा पनि समस्या आउन सक्दछ।
पछिल्लो समयमा दाँतको समस्या लिएर आउने मानिसहरुको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। ओपिडिमा दाँतको समस्या भएकाहरुको भिड लाग्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बीचमा मानिसहरु अस्पतालमा उपचारकालागि कमै आउने गरेका थिए। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै पुन मानिसहरु बढ्न थालेका छन्। हरेक दिन ४० जना मानिसहरु अस्पताल आउने गरेका छन्।
पहिले जस्तो ताजा खानेकुराहरु खाँदा दाँत सफा भइराख्ने गर्दथ्यो, तर आजभोलि फास्टफुड, तारेको, पोलेका खानेकुरा, प्याकेटका बढी खान थालिएको छ। चाउचाउ, चक्लेटहरु बढी खाँदा दाँतमा धेरै अड्कने गर्दछ।
राति खाना खाएपछि पनि दाँत माभ्नुपर्छ भने, दाँत माझेपछि केही पनि खानु हुँदैन।
फलफूल तथा तरकारीहरु दाँत सफा राख्न मद्धत भएका कारण यस्ता खोकुराहरु खानु उपयुक्त हुन्छ। खस्रो खालको वा काँचो सलादहरुले यसमा मद्धत गर्छ।
समयमै उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ भने हरेक ६-६ महिनामा दाँतको सफाई र उपचार गर्नुपर्छ। मानिसहरु नदुखेसम्म दाँतको उपचार गर्न आउँदैनन्। यो बानीलाई हटाउनुपर्छ।